You may copy and paste my writings, but… – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 19 October 2010 19 October 2010 Categories Discussion, Thoughts
4 thoughts on “You may copy and paste my writings, but…”
i agree with u sayar…
ဟုတ်ပါတယ်.. တစ်ခါတလေ mail ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို forum တစ်ခုခုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာကောင်းလေးတွေ ဖတ်ရရင် မူရင်းရေးသူ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဝေမျှသူတွေက ဘာ Link တစ်ခုတလေမှ မထည့်ကြပါဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ပါဘူး..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မူရင်း ရေးသူ၊ မူရင်း link ကိုတော့ ဖော်ပြပေးသင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်..။
20 October 2010 at 11:17 pm
“မူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍…” ဒါလေးကို အခုမှ သတိထားပြီး ဖတ်မိတယ်…။ ကဲ… လက်တွဲဖော်ကိုမူပိုင် တစ်ခု ပေးလိုက်ပြီ (Comment)။ မျှော်ပါဘူး.. Comment လေး ရေးတာနဲ့ စာမူခ ဆိုတာကို…။ မျှော်တာက စာကောင်း စာမွန်လေးတွေ ဖတ်ရဖို့ပဲ…။ များများ ဖတ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ မူပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီးပေးလိုက်မယ်…။
`”မူပိုင်ခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍…” ကြေညာ စာတမ်းကို သဘော တူပါသလား` ဆိုရင်တော့ တကယ့် ရင်ထဲက ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အော်လိုက်မယ် “သဘောတူပါတယ်…. ထောက်ခံပါတယ်” လို့။ (မှတ်ချက်: အခါတိုင်း စိတ်မပါသော်လည်း အော်နေကြရသော ကြားနေကျ အသံမျိုးကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။)
Previous Previous post: After You by U Hpone (Datu)
Next Next post: A Jumble of English Words and Phrases